Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekooyinka dhalinyarada ee Demarai Gray Story Plus
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius Football' kaasoo si fiican loogu yaqaan magaca "Gray". Dabeecadeena Demarai Gray oo lagu daro Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskeeda, sheekada nolosha ka hor caan, sheekada sumcadda, xiriirka iyo nolosha qofka iwm.
Haa, qof walba wuu ogyahay xeeladkiisa, qulqulkiisa iyo farsamadiisa taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dhaqsaha badan kubada cagta England. Si kastaba ha noqotee, qaar yar oo keliya ayaa tixgeliya sawirrada "Demarai Gray's Biography" oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Hore iyo Taariikhda Qoyska
Demarai Remelle Gray wuxuu ku dhashay 28th ee Juun 1996 ilaa Birmingham, Boqortooyada Ingiriiska. Gray wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa Jamaica waxay u mahadcelisey waalidiintiisa kuwaas oo si toos ah jagooyinka Jamaican u haysta. Tani waxay ka dhigan tahay inuu yahay sida waqtiga qorista oo weli xaq u leh inuu u ciyaaro Jamaica.
Demarai Gray wuxuu ka soo jeedaa asal ka soo jeeda qowmiyadaha heerka dhexe oo leh dhaqanka British Jamaican kaas oo aan ka duwaneyn midka uu arkay Jamaican-ka British ah sida; Daniel Sturridge, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker, Danny Rose iyo Chris Smalling.
Gray 's Wisterka - Abaalmarinta Twitterka
Gray wuxuu ku soo barbaaray gabadhiisa, Gray wuxuu dhiganayay Dugsiga Sare ee Frankley halkaasoo uu bilaabay inuu ciyaaro tartan kubadda cagta ah oo uu sii dheerey saacado kadib dugsiga. Hawlaha kubada cagta ee xilliga hore waxay bixiyaan dakhliga sida ay u horseeday xirfad.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Nolosha Mudnaanta Hore
Ka hor inta uusan la joogin Dugsiga Sare ee Frankley, Demarai Gray wuxuu bilaabay inuu la ciyaaro kooxdiisii ​​dhallinyarada ee degmada, kooxdiisii ​​hore ee Cadbury Athletic. Wuxuu ka dhigay aragti ah kooxda oo keentay inuu ku guuleysto fursado waxbarasho deeqaha Birmingham Academy.
Gray wuxuu ku biiray akadeemiga Blues isagoo ka hoos shaqeynayay 11. Khadka ayaa hoos u dhacay, ayuu la kulmay oo noqday saaxiibo Nathan Redmond oo uu mar hore u tixgeliyey inuu yahay saameynta ugu weyn ee xirfaddiisa dhalinyarada.
Demarai Gray saaxiibtinimada hore ee saaxiibtinimo Nathan Redmond. Deyn u dirista Pinterest iyo Birmingham Post.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Waddada Weyn
Gacanka, cabsida iyo farxada leh ee Grey wuxuu sii waday aqoontiisa kubada cagta ilaa 2012. Xiddigiisii ​​xilli ciyaareedka soo socda (2013-2014) ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga Academy-da ee xilli ciyaareedka.
Demarai Gray waa waddo loo calaameeyay (Abaalmarinta BBC)
Xilli ciyaareedkan ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Gray isagoo ku biiray kooxda koowaad ee Birmingham halkaasoo uu ku bilowday tartan si uu u noqdo bilowga rasmiga ah.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Kusoo caan bax
Inkastoo kooxda Birmingham ay tahay kooxdii ugu horeysay, Gray wuxuu u tartamayaa kaalinta koowaad ee kooxdiisii ​​hore ee Federico Macheda. Waxay ahayd tartan caafimaad qabta oo arkay Gray oo soo baxay iyo Macheda ka tagay kooxda.
Tani waxay ahayd waqtigii maamulka kooxda Birmingham ay aaminsaneyd in uu muujiyay qaangaadhin koraya. Grey ayaa jabiyay rikoorkii 2014-2015 ee arkay isaga oo ku guuleystay seddex koob oo ah kuwaa; Horyaalka Kubadda Cagta Kubada Cagta Bisha December Daawo 2014, Birmingham City Goolka iyo Ciyaaryahanka 2014-2015.
Dhamaan xarigaha caafimaadka ee Gray iyo awoodda ay ku qarashgareyn lahaayeen daafaca ma aysan dhicin wixii ka dambeeyay Premier League ee champion Leicester City oo qandaraaskiisa lagu burburinayay. Gray ayaa ku biiray kooxda heysata horyaalka ee 4th ee Janaayo 2016 waxaana uu ka caawiyay saaxiibadiisa inay helaan guushoodii horyaalka Premier League.
Demarai Gray ayaa ku biiray kooxda Premier League ee Premier League
Inta kale, sida ay yiraahdaan waa taariikh.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Nolosha Xiriirka
Yaa iska leh Daraawiishada Gray?
Gabadha saaxiibka ah ee Demarai Gray - Xaqiiqooyinka Xogta ah (Credit to Instagram)
Raaxada qarsoon ee Gray waa mid ka soo baxa isha indhaha dadweynaha si fudud sababtoo ah noloshiisa jacaylku waa mid gaar ah oo laga yaabo inuu yahay riwaayad la'aan. Gray sida wakhtiga qorista ayaa go'aansaday inaanan wax macluumaad ah ka helin nolosha xiriirkiisa.
Wuxuu mar mar siiyey codsi waraysiga si uu uga jawaabo su'aal ku saabsan xaaskiisa. Hoos waxaa ku qoran fadhiga wareysiga.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Maalinta Demarai Grey Dhimashada Khiyaanada:
Ma ogeyd?… Demarai Gray ayaa mar qiyaastii geeriyootay ka dib markii uu xargo isku xidhan ku duubay diyaarad helicopter ah oo safar ku tagtay magaalada Leicester City ee abaalmarinta Awards Awards.
Maalinta Daraasada Demarai Gray ee Dhimashada (Abaalmarinta FameFlynet.uk.com)
Sababtoo ah xooga dabaysha, ayaa Jamaican-ka Britishka la jiiday markii uu ku dhawaaday inuu ku socdo gawaarida duufaanta. Hawlgalka degdegga ah ee shaqaalaha Helikobter-ka ayaa ka caawiyay in looga hortago shil gaari. Eeg dhacdada fiidiyaha.
Wuxuu mar uun ku neefsaday Hippy Crack Lack:
Dhacdadan ayaa dhacday ka dib markii guuldaradii horyaalka Leicester City ay ka soo gaartay Everton. Waxay ahayd xilligii uu Birmingham ku dhashay kubadda cagta isagoo filayay in uu neefsanayo oksaydh yar oo halis ah, oo loo yaqaan 'hippy crack'.
Filarai Gray ayaa naftiisa ku neefsanaya Hippy Crack (Abaalmarinta Mirror)
Gray ka dib markii la miiray walaxda ayaa go'aansaday inuu soo dhejiyo fiidiyoowgiisa muuqaalkiisa ee Snapchat.
Inkasta oo, waa sharci si aad u sarreeysid BUT oo hay'adaha dawada la dagaallanka Britishka ayaa ka digay in neefsashada gaaska ay maskaxda ka saarto maskaxda oksijiinta oo ay dili karto.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- LifeStyle
Helitaanka in la ogaado qaab-nololeedkii Demarai Gray ee garoonka dhexdiisa ka jirta ayaa hubaal ka dhigaya inuu sawir buuxa ka helo.
Sida laga soo xigtay Mirror, Guuleystaha Premiership Demarai Gray ayaa u dabaaldagay horyaalkiisii ​​horyaalka Premier League isagoo leh Lambar madow.
Ma aha nooca kubadda cagta ee ku nool nolosha Habish Layla oo si sahlan loo ogaan karo oo leh muraayado farabadan oo qurux badan iyo duplexes ah.
Sheekada dhalashada ee Demarai Gray Sheeko Xogta Loo Yaqaano Xogta Wanaagsan- Naftaada Shaqsiga
Inkastoo ay tahay inaad akhrido kusaabsan khadadka uu jabsaday iyo khaladaadka helikabtarrada. Laakiin helitaanka ogaanshaha Demarai Gray noloshiisa gaarka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. Ka hor inta aan sii wadno, yey u sheegaan su'aasha.
Waa maxay nooca sifooyinka ee maskaxdaada ku yimaada markaad ka fikirto kubbadda casriga ah ee casriga ah?
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso shakhsiyaadka dabacsan. Laakiin Demarai Gray waa qof diiran oo jecel inuu maalgashado waqtigiisa iyo lacagkiisa aduunka oo meel fiican ka dhigaya.
Shakhsiyaadka Demarai Gray (Credit to Instagram)
Gray had iyo jeer si weyn ayuu ugu lug leeyahay shaqada samafalka. Waxa uu ka mid yahay kuwa kor u qaada cisbitaallada carruurta iyo jacaylka booqashada bukaanka. Waa arrin kaliya waqtigeeda ka hor inta uusan imaanin safiirka UK ee UNICEF.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta Dabeecadeena Demarai Gray iyo Xaqiiqooyinka Aan Biyeynin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.